Su'aalaha Inta badan La Isweydiiyo - Aloha United Way 2-1-1
Wicidaydu ma sirbaa?
Qof kasta oo la soo xiriira AUW's 211 Khadka Caawinta waxaa laga codsanayaa inuu bixiyo zip code, da'da, iyo jinsiga. Khabiiradayadu waxay u isticmaalaan macluumaadkan si ay u raadiyaan agabka ugu badan ee la heli karo oo diyaar u ah kooxaha da'da gaarka ah iyo jinsiga. Midkoodna macluumaadka la ururiyey looma isticmaali doono in lagu aqoonsado.
Shakhsiyaadka qaarkood ayaa laga yaabaa in la waydiiyo macluumaad dheeraad ah. Tusaale ahaan, markaad codsanayso macluumaadka SNAP u-qalmitaanka faa'iidada iyo kuwa oggolaaday a SNAP hore ee shaashadda, macluumaad dheeraad ah ayaa la codsanayaa. Xaaladahan oo kale, waxaanu ku waydiin doonaa ogolaanshahaada waxaana aanu ururin doonaa macluumaad dheeraad ah, sida magaca iyo da'da xubnaha qoyska. Waxaan qaadnaa taxadar kasta si aan u ilaalino macluumaadkaaga khaaska ah waligeedna lama wadaagi doono ogolaanshahaaga cad la'aanteed.
Maxaa ku dhacaya macluumaadkayga gaarka ah?
Macluumaadkaaga waxa loo ururiyaa si loo hubiyo inaad hesho kaalmada ugu fiican ee suurtogalka ah. Wax kasta oo aad la wadaagto 211 Takhasusle ama goobtayada ammaanku waa qarsoodi. Ma la wadaagno macluumaadka aqoonsiga cid ka baxsan.
Immisa adeeg ayaan ka heli karaa kaydka xogta?
Aloha United Way's 211 waa xudunta adeegyada bulshada ee Hawai. Waxa jira in ka badan 4,000 oo agab adeega deegaanka ah oo ku taxan xogtayada. Dhammaan liisasyadu waxay ka kooban yihiin adeegyada caafimaadka, bulshada, aan faa'iido doonka ahayn, iyo dawladda - ma jiraan liis ganacsi ama liis shakhsi ah oo ku jira xogtayada. Liisku mar walba wuu korayaa oo dhammaan jasiiradaha waa la metelaa.
Maxaa dhacaya haddii aanan ku noolayn Oahu?
Kaydkayaga waxaa ku jira agabka dhammaan jasiiradaha Hawaii. Geli sibka koodka si aad wax uga ogaato agabka kuu dhow.
Markaad garaacdo 211 waxa lagugu xidhidhi doonaa wakaalada 211 ee ku jirta koodka deegaankaaga. Haddii aad ka maqan tahay Hawai'i, wac 877-275-6569, waxaanu ku farxi doonaa inaanu kaa caawino ku xidhida xudunta 211 ee kuugu dhow.
Ingiriis si fiican uguma hadlo. Wali ma wici karaa 211?
Haa! Waxaan haynaa bixiye isgaarsiin oo ku bixin kara adeegyada turjumaada tooska ah in ka badan 150 luqadood.
Waa maxay habka ugu wanaagsan ee lagula xiriiri karo 211?
Mid kasta oo ka mid ah xulashooyinka hoose ayaa ku siin doona helitaan gargaar.
Wada hadal: Fur daaqadda wadahadalka.
Iimayl: Buuxi foomka iimaylkayaga.
Qoraal: U dir zip code kaaga 877-275-6569.
Mareegta: Ka raadi hagahayaga khadka tooska ah.